Guddiyada Doorashooyinka oo loo soo xirey tababar u socday muddo 3 cisho ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa soo xiray tababar muddo 3 cisho ah u socday Guddiyada Doorashooyinka heer federaal, heer dowlad-goboleed iyo xallinta khilaafaadka.
Muddada uu tababarka socday ayaa waxaa si faah faahsan guddiga uga doodeen diyaarinta jadwalka doorashada oo faah faahsan, Miisaaniyadda, anshaxa doorashada iyo daah-furnaanta, cadaaladda iyo hufnaanta doorashada.
Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa kula dardaarmay Guddiyada Doorashooyinka heer federaal, heer dowlad-goboleed iyo xallinta khilaafaadka in ay si cadaalad ah oo hufan u dhaqan geliyaan aqoonta iyo tababarka ay qaateen,islamarkaana ka soo dhalaalaan dadaalkii lagu bixiyay.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Federaalka ayaa 30-ka bishii juun 2021, tababarkan u furay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, Heer Dowlad-goboleed iyo Xallinta Khilaafaadka,isagoo kula dardaarmay in ay doorashada u maamulaan si hufan, daahfuran oo aan cidna lala jirin lagana jirin, wuxuuna u rajeeyay in uu Eebbe ku garab galo howshaas culus ee muhiimka u ah masiirka dalka.